केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’, किन खौ’रिन कपाल ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’, किन खौ’रिन कपाल ?
नायिका केकी अधिकारी नयाँ लुक्समा देखिएकी छन्। इन्टाग्राम स्टोरी मार्फत उनले आफ्नो कपाल खौ’रिएपछिको नयाँ लुक्स सार्वजनिक गरेकी हुन्। कपाल किन खौ’रिएको बारेमा भने उनले केही बताएकी छैनन् ।०७३ सालको साउन र भदौ महिनामा मण्डला थिएटरमा मञ्चन भएको नाटक ‘बो’क्सीको घर’ को कथामा केकीले फिल्म निर्माण गर्ने भएकी छन्। ***यो समचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।***